Shanghai Duxia Mmeputa na ahia
Ihe eji eme plastic
PP kpara akpa igwe
Olee otú ịhọrọ a kwesịrị ekwesị Pee fụọ film igwe / Pee film ịfụ igwe?
Nine isi arụmọrụ chọrọ nke plastic ịse
Ihe ndị chọrọ nlebara anya na ọrụ nke igwe ịkụcha
Kedu otu esi emeso agba itoolu kacha sie ike na igwe obibi akwụkwọ?
Slitting Machine Ọrụ Encyclopedia
Dịanụ masterbatch na film ịfụ usoro
LDPE film ịfụ usoro nwere anọ na isi akara ihe
Scientific mmepe na nkà na ụzụ ọhụrụ nke plastic akpa Ndinam igwe
Plastic granulator / plastic imegharị ihe maka iji igwe na-arụ ọrụ chọrọ
Common nsogbu nke plastic akpa Ndinam igwe
Ihe dị iche n’etiti igwe obibi akwụkwọ flexo na igwe na-ebi akwụkwọ gravure
Asụsụ 108 na akuku aka nri aka nri
+ 8615221892684, +8613564398120
Mee ihe kacha mma na igwe igwe na China
Mepụta akara ụwa!
Shanghai Duxia Industry na Trade Co., Ltd. bụ ihe enterprise na-elekwasị anya n'ichepụta plastic nkwakọ ígwè. E hiwere ụlọ ọrụ anyị na 2002 ma dị na Ruian City, Zhejiang Province, n'ụsọ oké osimiri nke Osimiri East China. Anyị guzobere otu ụlọ ọrụ na Shanghai na 2017. companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi ebe karịrị 3,000 square mita. E nwere ihe karịrị 100 ọrụ na ihe karịrị 10 technicians. Anyị nwere ike oru ike, ọkaibe nhazi akụrụngwa, zuru ezu ule ụzọ, na film ịfụ igwe. Ngwaahịa ndị a nwere njirimara nke ọnụego mmezi dị ala, ogologo oge were ya, arụmọrụ dị elu, obere mkpọtụ, wdg, yana ndị ọkachamara tụkwasịrị obi na njikwa njikwa sayensị.
Isi ngwaahịa nke Shanghai Duxia Industry na Trade Co., Ltd.: ihe nkiri na-afụ ụfụ igwe, igwe obibi akwụkwọ, plastic bag machine machine, plastic recycling machine.
Igwe ihe nkiri na-agba ọkụ
Plastic akpa Ndinam igwe
Etu ị ga - esi họrọ igwe fịlị kwesịrị ekwesị
Igwe na-afụ ihe nkiri bụ igwe na-ekpo ọkụ ma na-agbaze ụmụ irighiri ihe plastik wee feba n'ime ihe nkiri. Enwere igwe ihe nkiri na-afụ afụ na-eji PE, POF, PVC, PP dị ka akụrụngwa maka mmepụta ...... .
Usoro obibi akwụkwọ flexographic na gravure Printing nwere uru nke ha. Uru nke mbipụta akwụkwọ ntanetị bụ: kwesịrị ekwesị maka mbipụta ma ọ bụ mbipụta nke ngwaahịa ...
ụdị akpa rọba
Typesdị akpa rọba ndị bụ isi (1) Akpa rọba polyethylene. (2) obere-polyethylene plastic akpa. (3) Polypropylene plastic bag (4) ịkwanyere plastic akpa ......
Plastic granulator iwebata
Isi aru nke plastic granulator bu onye na-achoputa ogwu, nke nwere ihe omuma, usoro nnyefe na usoro oku na oku.
Igwe eji egwughari igwe
Onye njikwa ahia: Sasha Liu
Ekwentị / WhatsApp: +8615221892684
Onye njikwa ahia: Andre Xu
Ekwentị / WhatsApp: +8613564398120
Facebook-f Twitter Google-gbakwunye-g Youtube Instagram
Shang Ikike niile nke Shanghai Duxia Industry na Trade Co., Ltd.